Dinika amin'ny fanoroana:Ahoana ny manao takelaka - Wikipedia
Dinika amin'ny fanoroana:Ahoana ny manao takelaka
1 TRINITE MASINA
2 Ny Trinite Masina
3 Ara-tantara :
4 Ara-litorijia :
5 Araka ny Soratra Masina :
6 Teôlojian’ny Trinite Masina
TRINITE MASINA[hanova ny fango]
Misitery lehibe amin’ny finoana kristianina ny maha Tokana Olona Telo an’Andriamanitra. Ankalazaina isaky ny alahady aorian’ny Pantekôty ity fety ity ho an'ny Eglizy katôlika rômanina. « Sanctissimæ Trinitatis » no anarany ôfisialy.
Ny Trinite Masina[hanova ny fango]
Andriamanitra tokana kanefa Olona telo no ambara amin’ny Trinite Masina : ny Ray, ny Zanaka, ny Fanahy Masina. Adihevitra maro no naterak’ity finoan’ny Eglizy ity. Tsy voalaza mivantana ao amin’ny Baiboly ny teny hoe Trinite. Na ireo kristianina voalohany aza tsy nampiasa ny teny fa tamin’ny asasoratr’i Tertullien tamin’ny 170 vao nampiasaina voalohany ny teny hoe Trinite. Na izany aza anefa dia miverimberina amina andinin-teny maro ao amin’ny Testamenta vaovao ny fanambarana ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, izay samy Andriamanitra. Tsy takatry ny saina maha olombelona tsotra ity misitery ity satria momba an’Andriamanitra. Noho Andriamanitra manambara ny tenany anefa dia misy fahalalana ampahany azon’ny sain’olombelona fantarina ihany.
Ara-tantara :[hanova ny fango]
Niainga avy amin’ny fandavan’ny olona maro ny fisian’ny Olona Telo ao amin’Andriamanitra ny famaritana ny teny finoana momba ny Trinite Masina. Ny famelabelaran’ireo Aban’ny Fiangonana no nahazoantsika ny finoana matotra sy mazava ankehitriny. Amin’ny asan’Andriamanitra amin’ny fitantanana ny famonjena ny olona no tena mampiharihary ny misiterin’ny Trinite Masina. Talohan’ny nahariana ny zavatra rehetra ny Ray no efa nandahatra ny famonjena. Nirahiny ny Zanaka sy ny Fanahy Masina hanatanteraka izany fikasany izany. Tsy nionona tamin’ny fandinihana ny asan’ny Olona Telo amin’izao tontolo izao sy amin’ny olona fotsiny anefa ny fandinihana fa niezaka nanakatra momba ny Trinite amin’ny fifandraisan’ny Olona Telo amin’izy samy izy, ao amin’ny fomban’Andriamanitra. Niteraka fisarahan’ny Eglizy tandrefana sy ny Grika tany atsinanana mihitsy aza ny adihevitra momba ny Trinite Masina, ny fiavian’ny Fanahy Masina, tamin’ny 1054. Ireo antokom-pinoana zandriny sasany dia tena mandà mihitsy ny Trinite Masina.
Ara-litorijia :[hanova ny fango]
Ny alahady manaraka ny Pantekôty no ankalazana manetriketrika ny Fetin’ny Trinite Masina. Nandritra ny fotoana lava, saika tapataona mahery, dia ny misterin’ny famonjena no nomarihina : fahatongavana ho nofo, fahaterahan’i Kristy, fanavotana, fahatongavan’ny Fanahy Masina. Rehefa avy nandalina sy nankalaza ary niezaka niaina ara-litorijia ny misiterin’ny fanavotana ny Eglizy dia mitodika amin’Andriamanitra izay looharano nhiaviana sy faratanjona hitodiana, amin’ny fetin’ny Trinite Masina. reto ireo vakiteny ao amin’ny Soratra Masina, torina fa Tenin’Andriamanitra, enti-mankalaza ity fein’ny Trinite Masina ity : Raha Taona A : Eks 34, 4-6 ; 8-9 : Miseho sy manambara ny tenany amin’ny vahoakany Andriamanitra : Andriamanitra be fitiavana sy be famindrampo. Dan 3, 52 : Ho anao ny fiderana sy ny voninahitra mandrakizay. 2 Kor 13, 11-13 : Ao amin’ny fitiavan’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Jo 3, 16-18 : Tian’Andriamanitra loatra izao tontolo izao. Raha Taona B : Deo 4, 32-34 ; 39-40 : Ny Tompo Andriamanitsika no hany Tompo tokana. Rm 8, 14-17 : Ny fananganana antsika ho zanaka ao amin’ny Fanahy Masina. Mt 28, 16-20 : Maova batemy amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Raha Taona D : Oh 8, 22-31 : Tao amin’Andriamanitra hatramin’ny voalohany ny Fahendrena. Rm 5, 1-5 : Mihavana amin’Andriamanitra ao amin’ny Fanahy Masina isika. Jo 16, 12-15 : Mitarika antsika ao amin’ny misiterin’Andriamanitra ny Fanahy Masina.
Araka ny Soratra Masina :[hanova ny fango]
Ireto misy andinin-tenin’ny Soratra Masina ahafahana mandalina ny Trinite Masina : Gn 1, 25-26 ; Gn 3, 22 ; Sal 109, 1-2 ; Iz 6, 3 ; Mt 28, 19 ; Jo 16, 16 ; 1 Pi 1, 1-2.
Teôlojian’ny Trinite Masina[hanova ny fango]
Amin’ny Teôlôjia dia azo ambara tsy am-pihambahambana fa ity Misterin’ny Trinite Masina ity no fototry ny resaka rehetra momba an’Andriamanitra sy ny fifandraisan’ny olombelona sy ny zavaboary amin’Andriamanitra. Ny fifandraisana misy eo amin’ny Olona telo « opérations divines ad intra » sy ny asa ataon’ny Olona Telo ivelan’ny Trinite Masina « opérations ad extra » dia samy maneho ny maha Fitiavana an’Andriamanitra. Tokana Andriamanitra fa tsy manirery : ny Ray miteraka ny Zanaka, ny Ray sy ny Zanaka mifankatia no manome ny Fanahy Masina. Ny maha Fitiavana an’Andriamanitra ao amin’ny Trinite Masina no izaran’Andriamanitra ny hatsarany amin’ny fahariana, itantanany amim-pahendrena ny fizotry ny tantara sy ny fihazonana ny fahariana hahatratra ny faratanjony ary anavotany azy. Diovin’ny fitiavan’Andriamanitra sy hamasininy ny zavaboary ary hakapony ho iray ao amin’i Kristy rehefa voavorin’ny Fanahy Masina. Miavaka amin’ny zavatra nohariany Andriamanitra kanefa miasa eo amin’ny zavatra nohariany sy izao tontolo izao, miasa ao amin’ny tsirairay amin’ny olombelona, miasa ao amin’ny Eglizy vahoakany. Amin’ireo sehatra rehetra ireo dia tsy mitsahatra mizara sy mampita ny ainy sy ny fitiavany Andriamanitra, fitiavana izay misongadina indrindra amin’ny fahasoavana, fahamasinana, fahamarinana, fanovana endrika. Mandrampahafenon’ny fotoan’andro hampiharihariana tanteraka ny fahavitan’ny fanavotana, amin’ny andro hisehoan’i Kristy amim-boninahitra, dia ny Fanahy Masina no antoka ho an’ny mpino. Efa nomena antsika ny fitiavan’Andriamanitra, izay isantarantsika ny fiombonana amin’ny fomban’Andriamanitra. Ao amin’ny Eglizy vahoakan’Andriamanitra no iainana sahady ny santatry ny fiombonana amin’Andriamanitra Trinite Masina. Ny Tenin’Andriamanitra sy ireo Sakiramenta no anamasinana ny olombelona, satria « manamasina ny zavatra rehetra ny Tenin’Andriamanitra sy ny fivavahana », hoy Md Paoly. Raha itakiana fiainana ara-pitondrantena kristianina mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny mpino dia satria manana fanantenana tsaratsara kokoa sy ambony lavitra, dia ny fidirana ao amin’ny fiainan’Andriamanitra Fitiavana : Ray, Zanaka sy Fanahy Masina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinika_amin%27ny_fanoroana:Ahoana_ny_manao_takelaka&oldid=971168"
Voaova farany tamin'ny 4 Jiona 2019 amin'ny 17:19 ity pejy ity.